Isitudiyo sobunewunewu - Ukubuka Iphuli Kufuphi neBaga Beach 613 - I-Airbnb
Isitudiyo sobunewunewu - Ukubuka Iphuli Kufuphi neBaga Beach 613
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe onguAgyat
Yindawo efanelekileyo yokuchitha ixesha elimnandi eGoa. Ifakwe ngaphakathi kwe24/7 yamasango oluntu lwePosh kunye neLuxurious complex ene-siming pool. I-Baga Beach imalunga. 2 km. Indawo yiStudio enesantya esiphezulu se-intanethi (Ngaphezu kwe-150 mbps isantya) enekhitshi, Indlu yangasese kunye nebhalkhoni enombono wedama lokuqubha. Ikumgangatho wokuqala. Iilwandle ezinjengeCalangute, Vagator, Candolim kunye neAnjuna nazo zikufutshane kakhulu.
Indawo yiStudio enesantya esiphezulu se-intanethi (Ngaphezu kwe-150 mbps isantya) ikhitshi, Indlu yangasese kunye nebhalkhoni enombono wedama lokuqubha. Ikumgangatho wokuqala. Iilwandle ezinjengeCalangute, Vagator, Candolim kunye neAnjuna nazo zikufutshane kakhulu.
Kukho ibhedi ye-Queen enkulu, i-intanethi ye-Ethernet enesantya esiphezulu esingaphezulu kwe-150 mbps isantya, i-TV ye-LED, iziteshi zesathelayithi, izitulo zeTata Sky, iWardrobe, iKitchen eSebenza ngokuPheleleyo enesicoci samanzi, umatshini wokuvasa, iSofa kunye neBalcony.
Ikhitshi: Isebenza ngokupheleleyo kunye negesi, izixhobo zokupheka, ifriji, ikhabhathi yasekhitshini, iketile yombane kunye neSicoci samanzi.
Inkonzo kaMaid iyafumaneka ngentlawulo eyongezelelweyo.
• Uqhagamshelo oluphezulu lwe-intanethi ye-Ethernet yebroadband enesantya esingaphezulu kwe-150mbps.
•Ibhalkhoni enequla lokuqubha.
•Ikhompleksi inendawo yokomelela kunye nendawo yokubhukuda.
•Izinyusi nezinyuko ziyafumaneka zombini .
•I-AC ngokupheleleyo kunye negumbi le studio elisekwe kakuhle.
•Ikhompleksi ibonelela ngokhuseleko lwe-24x7 ngeCCTV. Indawo engqonge le complex ikwayindawo ekhuseleke kakhulu.
•Siza kubonelela ngeeTowels & bedsheets, kodwa iindwendwe kuya kufuneka zilungiselele isepha kunye namaphepha ezindlu zangasese.
Iklabhu Cabana ngaphakathi kwe-1 km.
Ezinye zeelwandle ezidumileyo:
1. Baga - 5 imizuzu ukukhwela 2kms
2. Anjuna - 8 imizuzu ukukhwela ngesikuta 3km
3. Calangute - 8 imizuzu ukukhwela ngesikuta 3km
4. IVagator - 7 imizuzu ukukhwela kwi-scooter
Umbuki zindwendwe ngu- Agyat